Famokarana volume ambany | Famokarana volume ambany - Createproto - Createproto Tech Co., Ltd.
APPLICATIONS / Manamboatra volavola ambany
Ny famokarana hazakazaka fohy sy ambany dia azo tratrarina amin'ny fomba fanamboarana samihafa. Izy io dia manome antoka fa hifindra avy amin'ny prototype mankany amin'ny famokarana milamina ianao.
Createproto dia mpamokatra volavola ambany izay mampihatra fahaizana tsy manam-paharoa tsy manam-paharoa mba hanomezana kalitao sy hamerimberenana isaky ny faritra. Izahay dia mamaritra ny làlana tsara indrindra mankany amin'ny tsena mifototra amin'ny tanjon'ny tetik'asa sy ny andrasana, manome torohevitra mahomby sy voamarina avy amin'ny endrika, fitaovana, fizotry ny famokarana, ny famokarana, sns.
Famokarana haavo ambany mahomby sy mahomby
Ny fanamboarana volume ambany namboarina no làlan'ny ho avy
Androany, betsaka kokoa ny fanantenana amin'ny fanaingoana sy ny fahasamihafana avy amin'ny mpanjifa noho ny teo aloha. Rehefa mihena ny androm-piainan'ny vokatrao ary mihena ny tsingerin'ny fandefasana vokatra vaovao, dia zava-dehibe amin'ny tetikadinao ny fanavaozana malefaka sy ny tsena. Nampiroborobo ireo, ny famolavolana vokatra dia mivoatra haingana ary ny mpamolavola vokatra dia mampivily ny sain'izy ireo manomboka amin'ny famokarana betsaka ho amin'ny fanamboarana ambany.
Miankina amin'ny fomba fanodinana, ny fizotran'ny famokarana, ny fitaovana ampiasaina amin'ny bobongolo ary ny fitaovana ampiasaina, ny famokarana ambany ambany dia mazàna dia mitaky faritra 100 ka hatramin'ny 100K. Raha ampitahaina amin'ireo risika marobe sy ny vidiny mifandraika amin'ny fanovana haingana loatra amin'ny "varotra marobe" dia mampihena ny risika ny fanaovana fanodinam-bokatra ambany, mampihena ny famolavolana, mampihena ny fotoana ifanakalozana tsena ary miteraka fotoana itahirizana ny vidin'ny famokarana. Ny vahaolana mahomby amin'ny famokarana fohy na ambany be dia be dia be dia be no mahatonga ny mpandray anjara rehetra handray soa amin'ny androm-piainan'ny vokatra, manomboka amin'ny famolavolana ka hatramin'ny fanamboarana ary hatrany amin'ny fivarotana sy ny mpanjifa. Mifandraisa amin'ny mpitantana ny tetikasanay anio hanombohana ny tetikasanao amin'ny teny nindramina maimaim-poana.
Tombony amin'ny famokarana ambany
● Mora miovaova ny famerenana azy
Ny famoronana hazakazaky ny vokatra ambany dia mora kokoa hanamarinana ny famolavolana, ny injeniera ary ny famokarana alohan'ny hampiasanao vola amin'ny fitaovana famokarana lafo vidy ary hametrahana azy ireo amin'ny famokarana betsaka. Ny famerimberenana ny famolavolana haingana aorian'ny fizotran'ny pilot voalohany dia afaka manatsara sy manatsara ny vokatra alohan'ny hiatrehany mpanjifa bebe kokoa.
● Fihodinana fohy raha ambany ny vidiny
Rehefa lasa singa manan-danja kokoa amin'ny tetibolan'ny tetik'asa ny vidin'ny fitaovana sy ny fanamboarana dia matetika no mahomby kokoa noho ny vokatra novokarina ny fizotry ny famokarana ambany noho ny famokarana haingana kokoa sy ny fotoana fohy kokoa noho izany, ka mampihena ny vidin'ny famokarana. .
Ho fanampin'izay, ny toeram-pamokarana betsaka dia matetika mametraka fepetra takiana farafahakeliny mba hanonerana ny fampiasam-bola mavesatra ataon'izy ireo sy hanaronany ny vidiny. Na izany aza, ny mpanamboatra habe ambany dia hanampy anao amin'ny filaharana haingana sy malefaka kokoa. Tena mahasoa indrindra ho an'ny dingana voalohany sy orinasa kely ka hatramin'ny antonony.
● Tetezo mankany amin'ny famokarana ny banga
Ny famokarana singa an-jatony hatramin'ny arivo mialoha ny famokarana dia mety ho dingana iray tena ilaina alohan'ny hifindrana amin'ny famokarana betsaka. Ny fihodinan'ny mpanamory dia afaka mampifandray ny elanelana misy eo amin'ny prototype sy ny famokarana, mahazo ny fizotranao, ny fitsapana fitoviana ary ny fanamarinana ny famolavolana injeniera vita haingana, mamela anao hampiseho ny mpanjifa sy ny mpivarotra mety ho vokatra vita famaritana, ary avelao ny olana rehetra ho hita sy nahitsy talohan'ny namindrana azy ireo tamin'ny famokarana.
● Fotoana fohy kokoa hamarotana
Miaraka amin'ny fifaninanana mahery vaika eo amin'ny tsenan'ny vokatra, ny fahatongavana ho orinasa voalohany manana vokatra tokana hampiroborobo ny tsena dia afaka mampisy fahasamihafana eo amin'ny fahombiazana sy ny tsy fahombiazana. Ny fampifangaroana ny tsena tena mifaninana sy tsy azo vinavinaina dia nahatonga ireo mpamorona sy injenieran'ny famolavolana hiatrika tsindry lehibe hamorona vokatra avo lenta farafahakeliny fotoana faran'izay mety. Koa satria ny famokarana sy ny famatsiana ny rojom-pamokarana dia nohamarinina ho an'ny vokatra ambany dia ambany, ny famokarana dia afaka miantoka ny fahafahan'ny tetikasa, ary manao ny vokatrao ho any amin'ny tsena haingana amin'ny vidiny mirary.
Fampiharana amin'ny fanamboarana haavo ambany
Prototypes miasa izay mifanaraka amin'ny vokatra farany
Prototypes injeniera ambaratonga famokarana
Fitaovana tetezana haingana na famokarana tetezana
Ireo singa mialoha ny famokarana ho an'ny fitsapana fanamarinana (EVT, DVT, PVT)
Fizarana milina ambany haben'ny CNC
Sombiny vita amin'ny tsindrona plastika ho an'ny hazakazaka mpanamory
Fanamboaran-taratasy metaly ambany
Vokatra namboarina avo lenta
Fihodinana fohy an'ny faritra famokarana
Avelao ny UseProto hikirakira ny filanao manamboatra volavola ambany rehetra
Masinina cnc Low-Volume Custom
Amin'ny sehatra manokana amin'ny famokarana volavola ambany, ny milina CNC dia mitana andraikitra lehibe amin'ny famokarana manokana ho an'ny faritra vita amin'ny plastika sy vy. Ny famokarana amin'ny volume ambany amin'ny milina CNC dia vahaolana iray fanombanana tsara ihany koa ho an'ny fandaharam-pamokarana betsaka ho avy.
Amin'ny maha mpanamboatra matihanina amin'ny milina cnc azy dia nanompo ny mpanjifa avy amin'ny indostria maro samihafa i CreateProto tamin'ny alàlan'ny fanamboarana singa milina avo lenta sy marina ary ampahany sarotra. Ny fampifangaroana fitaovana avo lenta sy ny fahalalana sy ny traikefa tsy manam-paharoa an'ny mpikambana ao amin'ny ekipanay dia manome antsika tombony lehibe ho an'ny famokarana hazakazaka fohy ary manampy ny mpanjifa hahatsapa ny fahaiza-mamolavola amin'ny alàlan'ny fizotran'ny milina haingam-pandeha.
Manolotra fivarotana iray tokan-tena izahay ho an'ireo tetik'asa fanodinana volavola ambany rehetra any Shina. Na mila plastika kilasy famokarana, metaly isan-karazany, na faritra vita amin'ny masinina vita amin'ny aliminioma ianao, dia afaka mitantana ny fifangaroan'ny fitaovana sy ny volavola ho anao ny CreateProto.
Famolavolana tsindrona haingana mahomby
Ny famolahana tsindrona haingana dia manome safidy tsara kokoa ho an'ireo mpanjifa mila faritra mavitrika ambany. Tsy vitan'ny fanamboarana ampahany plastika marobe famokarana an-jatony fotsiny ho an'ny fanandramana fanamarinana akaiky ny vokatra farany, fa koa ny famokarana onjampeo farany ampiasain'ny faritra farany ho an'ny famokarana ambany.
Ao amin'ny CreateProto, manokana momba ny bobongolo haingana izahay, na amin'ny aliminioma na amin'ny vy na amin'ny famolavolana plastika ambany, ary amin'ny ampahany haingana aminao amin'ny fandaharam-potoana izay manohana ny fandaharam-potoana fitsapana sy famokarana mialoha anao. Izahay dia mampifangaro ny fomba fanamboarana lasitra nentim-paharazana amin'ny alàlan'ny fitaovana bobongolo haingana hanomezana torohevitra mahomby sy voamarina avy amin'ny endrika, fitaovana, fizotran'ny famokarana, famokarana, sns.
Mandritra izany fotoana izany, rehefa marin-toerana ny volavola na mitombo ny volany, dia hifindra amin'ny famokarana bobongolo mahazatra ho an'ny tombotsoanao ny CreateProto. Ny vahaolana samihafa ho an'ny plastika manokana dia miasa miaraka amin'ny loharano tokana ho an'ny zava-drehetra manomboka amin'ny prototype ka hatramin'ny famokarana ho an'ny fandefasana.
Fanamboarana vy vita amin'ny metaly manokana
Ny fanamboarana metaly takelaka dia ny dingan'ny famolavolana ampahany amin'ny ravina vy amin'ny alàlan'ny fanapahana, fikapohana, fametahana, hiondrika ary famaranana. Raha ampitahaina amin'ny vidin'ny fandefasana avo sy ny vanim-potoanan'ny famokarana be dia be, ny fanamboarana metaly ambany dia hampihena ny fotoana fametrahana mba hahafahana miova haingana ny asa.
Ny serivisy vita amin'ny metaly CustomProto dia manolotra vahaolana mahomby sy an-dàlana ho an'ny filanao famokarana. Manomboka amin'ny iray prototypes ka hatramin'ny famokarana ambany, manome karazana fomba fanamboarana, fananana ara-nofo ary safidy farany izahay. Ny fahaizantsika dia misy ampahany amin'ny fanamboarana vita amin'ny vy tsy misy fangarony, aliminioma, vy, varahina, varahina, nandrisika sy maro hafa, ary ny fanaovana ny takela-by, ny zana-kazo, ny casse, ny chassis, ny fonosana ary ireo singa hafa mihodina amin'ny fivoriambe.
Mirehareha amin'ny fanatsarana tsy tapaka ny traikefan'ny mpanjifantsika izahay amin'ny alàlan'ny teknolojia sy fanohanana mivoatra, ary miara-miasa akaiky amin'ny mpanjifanay mba hanomezana ambaratonga avo indrindra ny serivisy fanodinana ambany.
Serivisy fanaovana pirinty 3d sy Prototyping haingana, Prototyping haingana, Prototyping haingana, Cnc Prototyping haingana, Prototyping haingana sy famokarana, Cnc Prototyping,